Gị B2B Ahịa Strategy adịghị edozi na Asịwo Njem | Martech Zone
Ọ dị mma… nke a ga - agba ntakịrị, ọkachasị ndị enyi m n'ahịa:
Ndị otu na-ere ahịa na-agbasi mgba ike iso ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ ma na-ezute ebumnuche ha na-eduga nfu na arụmọrụ ahịa. The ahịa bụ esiwanye ike iru, na-eduga ahịa arụpụtaghị metrics na idobe nke a n'elu ugwu. Mgbe ndị na-ere ahịa mechara kwuo maka ebumnuche ha, ndị ahịa na-ele ha anya dị ka ndị a na-akwadoghị nke ọma, nke bụ isi n'ihi na onye ahịa taa na-enweta ọtụtụ ozi na nghọta na-enweghị ngwụcha tupu ha etinye aka na ahịa. Ndị ahịa ndị a na-agbanyeghị nsogbu anaghị akpọ ahịa ahịa ka ha weghachi usoro a, nke pụtara na ego na mbọ etinyela iji ruo ndị ahịa ahụ lara n'iyi.
My agha mkpu ruo afọ iri ugbu a bụ otu ihe ahụ, na gị ahịa otu na-adịghị ejikọta na atụmanya ebe ha na-, ma ọ bụ gị ahịa ihe onwunwe. Kwa afọ, o yiri ka Ogologo oge nke Eziokwu - ebe ahụ ebe onye ahịa ma ọ bụ azụmahịa na-eme ha mkpebi ịzụta - na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-aga n'ihu site na isi ịkpọtụrụ ndị ahịa gị.
Nke a bụ isi ihe na ọdịnaya ahịa na-elekọta mmadụ media ahịa azum… ka nwere nnyocha ihe onwunwe na gị ahịa pesonel nso na mgbe na mkpebi okirikiri. Naanị ịtinyekwu SPIF (Ego Azụmaahịa Arụ Ọrụ), mkpali, ebumnuche, ma ọ bụ ọbụlagodi teknụzụ ezughi.
Ọ bụ ya mere anyị ji arịọ ndị ahịa anyị ka ha gaa n’ihu na-emepe emepe transportable ọdịnaya dị ka infographics, whitepapers, ikpe ọmụmụ, webinars, n'ihu yana inweta ha ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa na-elekọta mmadụ. Ọ bụkwa ihe mere anyị ji etinye ngwa dị mma, dị ka ọgụgụ isi IP, iji chọpụta azụmaahịa ndị na-eleta saịtị gị ka ị nwee ike iru ma jikọọ na ha tupu emere mkpebi nzụta ahụ.
AhịaBridge mepụtara ihe omuma a iji nyere aka iji uche nke okwu a. Ngwọta MarketBridge na-enyere Marketing na Ahịa aka ịbawanye ogo pipeline, ọsọ ọsọ, ọnụego dị nso, na iguzosi ike n'ihe ndị ahịa.
Tags: b2b ndị na-azụ ahịa njemndị na-azụ ahịa njemimechi ọnụegoezi ndị ahịadịkwuo pipeline oluahịa ahịainwetaInweta egommegharị ahịasmart nchịkọtaspifsọsọ ọsọ
Amụma ahịa bara uru iji mee atụmatụ maka 2015